SomaliTalk.com » Xildhibaan Shiiraar oo Beeniyey in Xarigiisa uu ka Dambeeyey Faarax Cabduqaadir.
“Warka lagu daabacay Shabakadda (internet ah) waa mid aan jirin oo been-abuur ah, mana aqaanno website-kaas mana jiro wareysi aan siiyay iyo qoraal aan u diray intaba, iyagaana laga doonayaa inay caddeeyaan meesha ay warka ka keeneen,” ayuu xildhihbaan Shiiraar yiri.
“Madaxweynaha Dalka iyo Ra’iisul Wasaaraha ma jirto cid aan xulufo la ahay ama ay saaxiibnimo gooni ah naga dhexeyso, waxa keliya ee naga dhexeya waa sidii aan dalka horumar u gaarsiin lahayn uuna uga bixi lahaa dhibkii uu kusoo jiray muddada fog,” ayuu xildhibaanku hadalkiisa raaciyay.
“Ma jiro qoraal aan diray iyo cid aan wareysi siiyay, sharci ahaanna maba dhici karto in Wasiir uu amar siiyo ciidamada nabadsugidda oo ay xildhibaan xiraan. Balse xariggayga iyo sababaha la ii xiray ma doonayo in Saxaafadda aan uga hadlo, waxaanse u gudbiyaan hay’adaha ay quseyso,” ayuu Shiiraar
“Faarax C/qaadir waa nin saaxiibkey ah, ma jiro wax khilaaf ah oo aniga iyo isaga na dhexmaray, waxaana heshiis ku nahay inaan kawada shaqeyno sidii uu dalkan horumar ku gaari lahaa, ugana bixi lahaa dhibaatada,” ayuu mar kale yiri xildhibaan Shiiraar.
Shabakad internet ah ayaa maalintii Talaadada ahayd oo qortay in xildhibaanku uu u soo diray qoraal uu ku sharraxayo khilaaf isaga iyo Faarax C/qaadir dhexmaray, kaasoo markii dambe sababay in xabsiga loo taxaabo, waa sida websitkaasi warka u dhigay.